Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Mpitantana Telegrama dia fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo mifantoka amin'ny fandefasana sy fandraisana hafatra an-tsoratra sy haino aman-jery. Tamin'ny voalohany, ny serivisy dia nampiasaina tamin'ny telefaona finday ary ny taona manaraka ho an'ny multiplatform azo alaina amin'ny rafitra miasa mihoatra ny 10: Android, iOS, macOS, Windows, GNU / Linux, Firefox OS, mpizaha tranonkala, sns.
Entre ny mampiavaka azy azontsika atao ny manasongadina ny fampiantranoana votoaty ara-tantara natambatra, 6 ary ny fahaizana mamonjy votoaty amin'ny resaka, fisie hatramin'ny 1.5 GB, ao anatin'izany ny antontan-taratasy, sary mihetsika multimedia sy sary, fikarohana atiny manerantany, boky mifandray, antso, fantsona fampielezam-peo, vondrona marobe, ankoatry ny hafa.
telegrama ampiasao ny fotodrafitrasao amin'ny teknolojia MTProto. Ho fanampin'ireo fiasa fototra, dia manolotra ny sehatra bot izay ankoatry ny fanaovana resaka mahira-tsaina ary afaka manao serivisy hafa ary mameno ny traikefa amin'ny resaka.
Mba hametrahana Telegram amin'ny Linux dia manana fomba fametrahana tsotra maromaro ahafahantsika mankafy ilay rindranasa avy amin'ny fiononan'ny birao.
1 Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?
2 Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Debian Sid?
3 Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Fedora 28 sy ny derivatives?
4 Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Arch Linux sy ny derivatives?
5 Ahoana ny fametrahana Telegram avy amin'ny Snap?
6 Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Flatpak?
7 Ahoana ny fanesorana ny Telegram amin'ny Linux?
Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?
ofisialy tsy misy fisoratana anarana ho an'ny Telegram ao anatin'ny repositories Ubuntu matoa ireo mpandrindra Telegram dia aleony manolotra tahiry binary binary tsotra fotsiny.
Izany no antony hanohana trano fitahirizana antoko fahatelo izahay hametraka ny rindranasa. Tsy maintsy manokatra terminal isika ary manao izao baiko manaraka izao:
Vita izao manavao ny trano fitahirizana izahay ary mametraka ny fampiharana miaraka:
Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Debian Sid?
Ho an'ity kinova Debian ity ihany manana ny fisoratana anarana ao anaty trano fitahirizana ofisialy izahay, ho an'ny fametrahana fotsiny tsy maintsy manatanteraka amin'ny terminal isika:
Fa inona no mitranga ho an'ny kinova taloha, aza manahy afaka mametraka Telegram avy amin'ny Snap sy Flatpak izahay etsy ambany no mizara ny baiko momba izany.
Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Fedora 28 sy ny derivatives?
Raha toa ka Fedora sy ny forongony, azontsika atao ny mametraka ity rindranasa ity camin'ny fanampiana repository RPMFusion, izay ilaina fa apetrakao sy ampiasao amin'ny rafitrao.
Mba hametrahana azy alefaso fotsiny ity baiko manaraka ity:
Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Arch Linux sy ny derivatives?
Ho an'ny raharaha Arch Linux, manana fonosana roa izahay ao anatin'nye AUR repositories telegram-desktop-bin sy ny fonosana telegram-desktop-git, amin'ny ankapobeny dia mahazo ny fampiharana ianao.
aza ny tolo-kevitra dia ny fitoerana Satria izy io dia handray ilay kinova farany farany indrindra mivantana avy amin'ny fonosana natolotry ny mpandrindra Telegram, ho fanampin'izay raha manandrana manangona ny git ianao dia ho reraka be loatra amin'ny fomba fijeriko.
Ho an'ny fametrahana anao mila nametraka ianao Yaourt ao amin'ny rafitrao ary ihany tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity ianao:
Ahoana ny fametrahana Telegram avy amin'ny Snap?
Ho an'ny ambiny amin'ireo fizarana ary na dia ireo voalaza etsy ambony aza afaka mametraka ny rindranasa avy ao anaty fonosana haingana izahayMila manana an'ity haitao ity hiasa ao amin'ny rafitray ihany izahay.
ankehitriny tsy maintsy manokatra terminal isika ary mihazakazaka ity baiko manaraka ity:
Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Flatpak?
Raha tsy tianao ny Snap na tsy azonao ampiasana azy dia azonao atao ny mankafy Telegram amin'ny solosainao nametraka ilay fampiharana miaraka amin'ny fanampian'ny Flatpak, amin'ny fomba mitovy tsy maintsy manana io teknolojia io ianao ao amin'ny rafitrao.
El mametraka baiko dia ity:
Ahoana ny fanesorana ny Telegram amin'ny Linux?
Raha te-hanala ilay rindranasa amin'ny rafitrao ianao, azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny baiko fanonganana rindrambaiko avy amin'ny rafitra fonosanao, raha mampiasa ny fomba fametrahana ianao eto, Nozaraiko ny baiko hanesorana ny Telegram amin'ny solosainao:
Ho an'ny Ubuntu:
Raha ny momba an'i Debian:
Ho an'ny Arch Linux sy ireo derivatives dia esorinay miaraka:
Amin'ny tranga Fedora, esoryo amin'ny:
Raha nametraka ny fampiharana amin'ny Flatpak ianao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny fametrahana Telegram amin'ny Linux?
Misy fantsona ho an'ity bilaogy ity ao amin'ny Telegram?
Hatramin'ny kinova Ubuntu 17.10 dia misy fonosana ofisialy ao amin'ny trano firaketana:
Nanompo ahy avy tao amin'ny terminal tany Peppermint 10 izy, niasa tsara, arahaba!
Kevin Figueroa dia hoy izy:
Ny fonosana telegram-desktop dia misy ao amin'ny tahiry ofisialy Linux Mint, saingy efa lany andro izy io. Mila mametraka ny kinova farany amin'ny rafitra aho fa tsy ilay mimari-droa omena azy ireo amin'ny tranokala Telegram
Valiny tamin'i Kevin Figueroa